I-Mummy yesifo sikashukela sohlobo 2: ukubuyekezwa kokwelashwa > Ukwelashwa nokuvimbela
UMumiyo onesifo sikashukela
Uma kukhulunywa ngokwelashwa kwe-mellitus yesifo sikashukela sohlobo lwesibili noma sokuqala, kunzima ukuthola isidakamizwa esisebenza kangcono ukwedlula i-mummy.
Inzuzo eyinhloko yesidakamizwa ingabizwa ngokuthi ezigabeni zokuqala zokuthuthuka kwalesi sifo, singasetshenziswa ngendlela eyinkimbinkimbi, ngokwesibonelo, ukuhlangana nephampu ye-insulin.
Vele, isimo sesifo sikashukela esithuthukile sidinga ukwelashwa okungathi sína, kepha akufanele ukhohlwe ngezinzuzo ze-mummy. Isenzo somuthi sihlose ukubuyisa umzimba.
Ngakho-ke, kungenzeka yini ukwelapha ushukela ngokusetshenziswa kwento? I-Mummy enesifo sikashukela inenombolo engapheli yezimpawu ezenza amandla ezindlela zokwelashwa abe mahle. Kodwa-ke, umuthi usetshenziselwa kakhulu izinhloso ezintathu ezithile ezisiza ukubhekana nesifo esikhohlisayo:
Ukulwa nokukhuluphala. Imvamisa, iningi labantu abanesifo sikashukela likhuluphele. Kungakho ukuvikela lesi sifo kubaluleke kakhulu ukuthi sehlise isisindo.
Ukuhlanzwa ngokuphelele komzimba womuntu.
Ukusheshisa kwenqubo yokupholisa amanxeba. Izinhlobo ezinzima zesifo sikashukela zihambisana nokuvela kwezilonda ezikhuluphayo, okunzima ukuzelapha. Ngaphezu kwalokho, kufanelekile ukuqaphela ukuthi noma yimuphi umonakalo wokupholisa isikhumba isikhathi eside.
Kungakho i-mummy enesifo sikashukela sohlobo 2 no-1 isebenza ngempumelelo kangaka. Ukusetshenziswa kwesidakamizwa esihlanganisiwe noma ukukhishwa kwaso kunciphisa kakhulu ushukela wegazi, kusiza ekulweni ngokuphumelelayo ne-pathologies yemitholampilo yohlelo lwe-endocrine.
Kuyaqapheleka ukuthi icala ngalinye lesifo lilodwa, kepha i-mummy, uma ingeke iholele ekululameni ngokuphelele, izokwehlisa kakhulu isilinganiso sokubonakaliswa kwezimpawu zesifo.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela esiyi-Mummy:
Yehlisa ukugxilisa ushukela.
Yehlisa imvamisa yokuchama.
Susa umuzwa wokoma ongapheli.
Kuzosiza ekulweni nokukhathala okukhulu.
Ucwaningo selufakazele ukuthi iningi leziguli ngokushesha ngemuva kokuqala inothi likamama lokuntuleka kokulimala kwekhanda, ukuncipha kokuvuvukala, kanye nokugcizelelwa kwengcindezi. Kodwa-ke, kwenqatshelwe ngokuphelele ukuthi uqale ukuphuza umuthi ngokungacabangi ngaphandle kokuqala ufunde imiyalo, futhi ngaphandle kweseluleko sezokwelashwa.
Izici zokupholisa ze-mummy zifaka phakathi izici zalo. Umuthi:
I-Immunomodulating. Ukuqoqwa okukhulu kwamaminerali nazo zonke izinhlobo zamavithamini kungathuthukisa izakhiwo zokuvikela umzimba.
I-antimicrobial. Ama-alkaloids nama-flavonoid abhekwa njengemithi elwa nemvelo elwa namagciwane ahlukahlukene angalimaza amanyikwe.
Anti-ukuvuvukala. I-Mumiye ayigcini nje ngokugcizelela ukugxila kokuvuvukala, kepha futhi inciphisa ukuvuvukala, futhi futhi inciphisa nomkhuhlane endaweni ethintekile. Lokhu kubalulekile kwiziguli ezithi, ezinesifo sikashukela, nazo ezihlushwa i-pancreatitis engamahlalakhona.
Ukuvuselela Ama-acid anamafutha kanye namaprotheni asiza ukulungisa amaseli e-B alimele kumanyikwe.
I-Glycemic. Ukukhiqizwa okwengeziwe kwe-insulin endulin kuvumela ukuthi wehlise okuqukethwe ushukela.
Into esezintabeni yabanesifo sikashukela yadalwa yimvelo uqobo, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukusebenzisa amandla ayo emvelo ukwelapha ukugula okungathi sína. Ukwelashwa okungcono kakhulu, yi-mummy ngesimo sayo semvelo.
Wonke amaphilisi ahlinzekwa yizinkampani ezenza amakhambi anikeza ikhambi elivele selelashwa ngokwelashwa. Ngaphezu kwalokho, ekwenzeni amathebulethi, ukulungiselela kwenziwa ngaphandle kokukhishwa okwenziwe inqubo yokuhlanzwa kwamakhemikhali.
Awukho umuthi owodwa wokwelashwa kwesifo sikashukela, noma kunjalo, umthamo okhethekile wento nganoma yisiphi isigaba sokuthuthuka kwalesi sifo uzosiza ukuthuthukisa isimo sesiguli. Umuthi uzinzisa ama-pancreas, usungula izinqubo ze-metabolic nokunye.
Kunezinhlelo eziningana zokwamukela:
Izindlela ezijwayelekile kufanele zithathwe ngenani lama-gramu ayi-0.5. Ucezu lwe-mummy kuleli cala alwedluli usayizi wekhanda lomeshi. Ungayigqashula usebenzisa ummese noma izimbobo. Ngemuva kwalokho i-mummy inyibilika ku-500 amagremu wamanzi. Ukuthuthukisa umphumela wokwelapha, kunconywa ukuphuza umuthi ngobisi.
Ukwehlisa ushukela wegazi, kanye nokunciphisa inani lamanzi asetshenziswa ngosuku, kuyadingeka ukuncibilikisa amagremu ama-0,2 omama emanzini afudumele. Isixazululo esikhona kufanele sidakwe ngosuku olulodwa amahlandla amabili, ngemuva kwalokho kufanele kuthathwe ikhefu lezinsuku ezinhlanu. Inkambo ihlala kuze kube yilapho isiguli esiphuza ngokuphelele isiphuzo esingu-12 amagremu umuthi.
Ezigulini ezitholwa uhlobo lwesibili sikashukela, kunohlelo olwehlukile. Amagremu we-3.5 ento kufanele ahlanganiswe ngokuphelele ne-0.5 amalitha amanzi. Ithuluzi kufanele lidakwe izinsuku eziyishumi, isipuni esisodwa, bese kuba yizinsuku eziyishumi nengxenye wezipuni nezinsuku eziyisihlanu nezipuni. Kufanele kube nekhefu lezinsuku ezinhlanu phakathi kwezifundo. Ngakho-ke ungalapha ngokuphelele isifo sikashukela sohlobo lwe-2.
Ngokuvimbela okuyinhloko isifo sikashukela, kuyadingeka ukuthatha amagremu angama-0,5 ento encibilikisiwe kabili ngosuku. Kusebenza kakhulu ukuphuza umuthi amahora angu-1.5 ngaphambi kokudla. Ukuhlanganisa isenzo, udinga nje ukwenza izifundo ezinhlanu, ngasinye sazo sithathe izinsuku eziyi-10, ngamakhefu ezinsuku ezinhlanu.
Kuyaqapheleka ukuthi umuthi ubekezelelwe kahle. Kunconyelwa ikakhulukazi abantu abasengozini, kufaka phakathi iziguli ezikhuluphele kakhulu, ezibhekene nengcindezi nokunye.
Abanesifo sikashukela, okuyisimo sabo esiye sehla kakhulu, kufanele bancibilike amagremu amane kamama eziphepheni zamanzi ezingamashumi amabili. Isixazululo kufanele sidakwe amahora amathathu ngemuva kokudla, kathathu ngosuku. Kufanele uphuze isipuni esisodwa sento, bese uyiphuza ngejusi entsha. Ukwelapha kuthatha izinsuku eziyishumi. Sekukonke, izifundo eziyisithupha kumele ziphindwe ngekhefu lezinsuku eziyishumi.
Lapho isiguli sinezinkinga zokuphazamiseka kwamathumbu esisisu (imvamisa sithayipha isifo sikashukela), esiboniswa ngokwakhiwa kwezilonda ebusweni be-mucosa, udinga ukwandisa umthamo we-mummy kuya kumagremu ayi-6 ngosuku. Intaba i-wax iphulukisa nezilonda ezinzima ezinsukwini ezimbalwa.
Leli yithuba elihle lokusiza umzimba, ngakho-ke ungangezela ngokwengeziwe isenzo sokudla okukhethekile kokulapha okungabuyisela umzimba.
Njengoba ngibonisa ukubuyekezwa okuningi, ukwelashwa okuhambisana nokwamukelwa kwe-mummy kuhlale kubuhlungu, kube nemiphumela emibi emincane nezinkinga ezimbalwa.
Kunokuphikisana okuningi lapho umuthi ungeke usetshenziselwe ukuvimbela noma ukwelapha isifo sikashukela. Phakathi kwazo kukhona:
Ukungabekezelelani komuntu ngamunye entweni.
Kuyenqatshelwa ukuthola omama bezingane kuze kube unyaka.
Awukwazi ukuphuza umuthi ezigulini ezihlaselwa yisifo i-Addison, izifo ezithinta i-adrenal gland, umdlavuza.
Abesifazane abakhulelwe futhi abalele futhi nabo bangaphansi kokuvinjelwa.
Lapho isiguli singazinikeli isikhathi eside ekwelashweni kwesifo sikashukela i-mellitus, esakhula saya esigabeni sokugcina, izimpawu zihlala zithiwa njalo. Kulokhu, i-mummy ingasetshenziswa kuphela njengesijobelelo. Kubalulekile futhi ukungagcwali inkambo, ungazikhulisi ngokuzimela umthamo noma ukwelule ukwelashwa.
Uma ungalandeli imithetho ebalulwe emiyalweni, noma ungazinaki izincomo ze-endocrinologist, ungasicindezela lesi simo. Iqiniso ngukuthi i-mummy ingumlutha. Kungakho izindlela zokupheka ezifakwe kuhlu zikhombisa ubude besifundo ngasinye, kanye nesikhathi sekhefu phakathi kwabo. Ividiyo ekule ndatshana izokhuluma ngakho konke okuhle kwe-mummy.
Kwabanesifo sikashukela, isimo esithuthuka kuye ekuwohlokeni kwenhlala-kahle nokwanda kwezimpawu, kusungulwa uhlelo olulandelayo:
4 g wento encibilikisiwe ku-20 tbsp. amanzi at lokushisa lasekamelweni. Thatha ngemuva kokudla amahora ama-3, kathathu ngosuku. Phuza isipuni esisodwa, phuza ujusi omusha. Ukwelashwa kuthatha izinsuku eziyi-10, uthathe ikhefu lezinsuku eziyi-10, uphinde futhi uqale ukuphuza izinsuku eziyishumi. Ungaphinda izifundo ezi-6.
Ama-anulin we-insulin athathwe ezilwaneni angenza umzimba uphendule. Ukungezwani komzimba kwisifo sikashukela kuboniswa ngokuqubuka okubomvu esikhunjeni semilenzeni nase esiswini. Kulokhu, izindlela zomuthi ezisemthethweni zincike ekukhululekeni kokulunywa, kepha hhayi ekwelapheni ukwaliwa yizo uqobo. Ngokuqondene ne-mummy, ithuluzi liyakwazi ukujwayeza ukubona komzimba ukungcola kweprotheni kwe-insulin. Ukuze wenze lokhu, i-wax yentaba ithathwa ngokuya ngesikimu: i-5 g yento ichithwa ku-500 ml wamanzi, phuza i-100 ml kathathu ngosuku. Kubalulekile ukuthatha isixazululo se-mummy ngaphambi nje kokudla, kungakadluli isigamu sehora.
Uma kunokuphazamiseka kwesisu ngendlela yezilonda kulwelwesi lwama-mucous, kufanele ukhuphule isilinganiso se-mummy encibilikisiwe kube ngu-6 g bese uphuza isipuni kathathu ngosuku. Umphumela we-wax yentaba ezilondeni uyahlaba umxhwele: izilonda ziyapholisa ezinsukwini ezimbalwa. Kulokhu, umzimba kufanele usize ekudleni. Ngokwesifo sikashukela, isidlo sasekuseni esihle kakhulu yi-oatmeal noma i-buckwheat. Ngakho-ke, ukwelashwa kusheshiswa ngenxa yesenzo esihambisanayo sepheshana lesisu: ukondleka okufanele, ukusetshenziswa komama ngokuphelele kunikeza ukuphulukiswa kwezilonda nokululama kwe-metabolic ngesikhathi esifushane.
Izici eziwusizo ze-mummy
Izimbumbulu zenziwa ngemikhiqizo yokumbesa enjengesihlabathi, uzipho lwezilwane, izinkuni, imbewu, uvolo nokuningi. Ngaphezu kwalokho, le nqubo akuyona eyokwenziwa, kodwa yemvelo, isuselwa ethonyeni lokushisa ngokweqile, umoya nokunye. Ngakho-ke, kudalwa amaminerali wemvelo onamakhemikhali acebile. Futhi i-mummy ifakwa emaqhekeni nasezindongeni zamatshe, izintaba.
Umphumela wokuphulukisa utholakala ngenxa yokwakheka okwehlukile kwe-mummy. Iqukethe i-premix ephelele yamavithamini (C, E, K, njll.), I-amino acid compounds, izinto eziningi ze-micro and macro. Zonke lezi zinto ezakhiweni eziyinkimbinkimbi zinezakhiwo eziwusizo ezinjalo:
sibonga ama-flavonoids nama-alkaloids, angama-anti zemvelo, ama-mummy enza izinto ezibulala amagciwane, abhubhisa ama-microorganisms ayingozi,
umphumela we-immunomodulatory womzimba wonke - ithoni nemisebenzi yokuvikela iyakhuphuka, ngenxa yokuthi amaseli angalwa ne-pathologies,
umphumela we-hypoglycemic - sibonga i-arginine, ukukhululwa kwe-insulin yendabuko kuvuswe,
ukuvuselelwa kabusha kwamaseli nezicubu ezonakele, njengoba i-mummy iqukethe ama-acid nama-protein,
Ukuqedwa kwezinqubo zokuvuvukala nokucindezelwa kwe-foci yabo,
ukungathathi hlangothi kokuvuvukala,
umphumela we-analgesic we-migraines.
I-Mummy enesifo sikashukela ayikwazi nje ukusebenzisa, kodwa futhi iyadingeka. Ngoba iyiminerali yemvelo enezinto eziyisisekelo ezihlose ukuguqula izimpawu ezingezinhle zesifo, kanye nokwelapha ngokuqondile nokugcina amazinga ashukela evamile.
Kungalesi sifo lapho ukukhuluphala, ukukhathala, gxuma ekucindezelweni kwegazi, ukuchama kaningi, ukoma, i-migraine kanye nokuvuvukala kuyaphawulwa. Umuntu onesifo sikashukela usengozini enkulu yokutheleleka ngamagciwane, kepha okubaluleke kakhulu izinga le-insulin noshukela elikhiqizwayo. I-Mummy inganciphisa ubunzima bazo zonke lezi zimpawu ezingemnandi.
Kule vidiyo uzofunda ukuthi i-mummy ibukeka kanjani, iziphi izakhiwo zayo nokuthi ungayikhetha kanjani kahle ukuze ungakhubeki kumikhiqizo engenamsebenzi. Ngesikhathi sokudluliselwa ngaphansi kwezimo zelebhu, kwenziwa ucwaningo lwesayensi lokufunda ukwakheka kwamakhemikhali ezinhlobo ezahlukahlukene zezidakamizwa zomm:
Ukusetshenziswa komama oshukela
Kunama-regimens athile omama besifo sikashukela:
Le ndlela yokupheka iyisifo sikashukela sohlobo 1. Kumalitha angu-0.5 amanzi ashisayo uzodinga amagremu angu-18 amaminerali ancibilika ngokuphelele. Udinga ukuphuza isisombululo esivela kathathu ngosuku imizuzu engama-30 kuya kwengamashumi amane ngaphambi kokudla. Ngesinye isikhathi udinga ukuphuza isipuni se-dessert. Isikhathi sokwelashwa siyizinsuku eziyi-10.
Ngohlobo lwesibili lwe-mellitus yesifo sikashukela, umthamo ungaba omncane, ikakhulukazi ezigabeni zokuqala. Dissolve 7 amagremu ayi-mummy kwilitha lamanzi. Thatha ngomlomo 1 tbsp. kathathu ngosuku izinsuku eziyishumi. Bese kuthi ikhefu lezinsuku ezi-5, khona-ke umthamo uyanda - phuza izinsuku eziyi-15 ku-1.5 tbsp.
Uma umuntu onesifo sikashukela ethatha i-insulin evela emvelweni, kungaphawuleka ukusabela komzimba. Kulokhu, i-mummy yemukelwa ngenye indlela. Kumalitha amanzi ayi-0,5 uzodinga u-5 amagremu amaminerali ngqo. Ukuze usebenzise ngaphakathi izikhathi ezi-3 ngosuku engxenyeni yengilazi.
Izincomo ezilusizo nezibalulekile zokusetshenziswa komama besifo sikashukela:
uma lesi sifo sihambisana nokulunywa kwesikhumba, ikhambi lizosiza, kepha kuyodingeka usiphuze ngobisi noma ujusi osanda kufakwa,
i-mummy idinga ukusetshenziswa ngonyawo lwesifo sikashukela,
umphumela wokuqala uzowubona ekugcineni kwenkambo yokwelashwa,
bambelela ngokuqinile kwimithamo ekhonjisiwe,
qiniseka ukuthi ucacisa inani lokwamukelwa nesikhathi sesifundo nodokotela we-endocrinologist,
Kuyenqatshelwe ngokuqinile ukuzibandakanya nokuzilapha.
Kaningi, i-mummy uma idliwe ibanga isicanucanu. Ungesabi. Kulokhu, ochwepheshe batusa ukumane ugeze umkhiqizo ngobisi noma usamanzi.
Ungayisebenzisa kanjani i-mummy ukuvikela isifo sikashukela
Ukuvimbela isifo sikashukela, uzodinga amanzi kanye no-mummy. Faka ama-8 amagremu we-mummy ku-40 tbsp. amanzi ashisayo. Chitha ngokuphelele. Lomthamo wenzelwa imithamo emi-2 - ekuseni ngesisu esingenalutho nakusihlwa ngaphambi kokulala.
Isikhathi senkambo yokuvimbela siyizinsuku eziyi-15. Ngemuva kwalokho udinga ukuthatha ikhefu lezinsuku eziyi-10 uphinde uphinde isifundo. Khumbula ukuthi amahora ama-3-4 kufanele adlule phakathi kokudla kwakusihlwa kanye nekhambi lokwelashwa.
Le nto yemvelo ye-organomineral isetshenziswa kaningi kwezinye izidakamizwa. Siqukethe izingcezu zento eminyene neqinile, ezingaba yipulasitiki noma ziqhekeke kalula. Siqukethe izakhi zezitshalo, izimbiwa kanye nemvelaphi yezilwane.
Ngokuhlangana, izakhi zokuhlangana zakha iphunga elithile. Inqubo yokwakhiwa kwe-mummy ayikafundwa kuze kube namuhla.
Le nto ikhishwa ezindaweni zezintaba lapho amalulwane atholakala khona ngamanani amakhulu. Lesi sidalwa esiphilayo sidla umpe, izitshalo. Imikhiqizo yomsebenzi wabo obalulekile inqwabelana ezindaweni ezahlukahlukene, ibhekana nenqubo yokufukuza ngaphansi kwethonya le-microclimate. Ngakho-ke, kwakhiwa i-mummy.
Isikhunta esenza i-mummy ibukeke njenge-penicillin, isuse ukutheleleka, welaphe udayi kanye nesifo sofuba. Siza ukubhekana nezifo ezibandayo zokuphefumula.
Isetshenziselwa ukwelapha i-anemia futhi ikhuphule amazinga e-hemoglobin. Izinga lamaseli abomvu egazi liyakhuphuka, izitho zangaphakathi zitholakala kangcono ngegazi. Izakhi zisiza umongo wethambo ukukhiqiza igazi.
I-Mummy isetshenziswa ekwelapheni ukuphazamiseka kwemizwa eminingi. Umsebenzi we-peripheral nervous system uyaqala kabusha, lokhu kuvimbela ukwenzeka konyawo lwesifo sikashukela. Izakhi zifaka isandla ekwakhekeni kweDNA.
Imithambo yegazi iyanda, i-metabolism iyathuthuka, uhlelo lokuhlinzekwa kwegazi lusebenza kangcono, umfutho wegazi ophakeme, i-atherosclerosis ivinjelwa. Ukucindezelwa kwegazi kwenziwa ngokwejwayelekile, i-tachycardia yelashwa, izicubu zenhliziyo ziyabuyiselwa.
Imisebenzi yokuvikela umzimba iyaqiniswa. Omama bavame ukusetshenziswa ezibhedlela zezingane.
I-Mummy ithathwa ngamanani amancane. I-18 g ichithwa ku-0,5 wamanzi ahlanzekile.Iziphuzo ezinjalo zidliwa isigamu sehora ngaphambi kokudla izikhathi ezintathu ngosuku nge-1.5 tsp. kungakapheli izinsuku eziyi-10. Lapho umuntu egula ngesikhathi sokuthatha, i-mummy igezwa phansi ngobisi ngamaphesenti aphansi wokuqukethwe kwamafutha.
4 g mummy,
20 tbsp. izindawo zokuhlala zamanzi ashisayo
umuthi uyachithwa, usetshenziswe ekuseni ngesisu esingenalutho futhi kusihlwa nge-1 tbsp. amanga
Kufanele kudlule amahora amathathu ngemuva kokudla
inkambo yokwelashwa ihlala izinsuku eziyi-15, bese kuqala ikhefu okungenani lezinsuku eziyi-10.
Umphumela wokuqala wokwelashwa uvela ngemuva kwezinyanga eziyi-1-2. Izimpawu eziphansi kakhulu zivela ngaphambi kokuxolelwa, okubonisa ukwanda kwesifo sikashukela. Ngokubonakaliswa okunjalo, kuyadingeka ukuxhumana ngokushesha nochwepheshe abasiza ukunciphisa ukuqala kwezimpawu noma ukufezekisa ukuxolelwa kwesifo isikhathi eside.
Ukunakwa okuyinhloko kukhokhelwa ukunemba kwemithamo; ukwephulwa kwemithetho kuholela ezinkingeni. Ngakho-ke, kuyadingeka ukulandela ngokuqinile izincomo zodokotela.
Kunconywa abantu abanezimfanelo zofuzo ukusebenzisa i-mummy ukuvimbela. Izimbangela zalesi sifo azifundwanga, kepha kunezici ezithile ezikhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi kunesifo sikashukela. Odokotela benza izivivinyo zemitholampilo.
Ngokwesifo sikashukela sohlobo 2, kuvela izinkinga ezinkulu ngokweqile. Imvamisa isifo esinjalo sizithola njengefa. Ukuzivikela ekuqhamukeni nasekuthuthukisweni okulandelayo kwesifo esiyinkimbinkimbi, isisindo sibhekelwa njalo, kufaka phakathi ngosizo lwe-mummy.
IMumiyo iyithuluzi elihlukile elisiza ukulwa nezifo ezahlukahlukene. Umkhiqizo uqukethe izingxenye zemvelo eziwuthinta kahle umzimba. Isakhi ngokwaso simbiwa emadwaleni nasemihumeni ejulile.
I-mumiyo iqukethe lezi zinto ezilandelayo:
Amaminerali ahlukahlukene athinta umzimba.
Umthofu, insimbi, i-manganese ne-cobalt.
Isethi enkulu yamavithamini.
Njengoba ungaqonda, lo muthi uzoba wusizo impela kwabanesifo sikashukela, ngoba ugculisa umzimba ngamaminerali namavithamini adingekayo. Ngomthamo ofanele, uzokwazi ukufeza imiphumela emihle kakhulu futhi uvikele ukuwohloka kwenhlala-kahle.
Ngabe umthelela muni kumama?
Abantu abanesifo sikashukela bavame ukuba nentshisekelo yokuthi ummy uthinta kanjani umzimba ngqo. Umuthi uwonke ubonakala kahle ngumzimba futhi unemiphumela eminingi emihle. Okokuqala, kwehlisa ushukela wegazi. Futhi, le ngxenye inciphisa ukoma okuvame ukuhlushwa yiziguli. UMumiyo udambisa ukukhathala okungapheli, futhi uphatha i-migraines. Kuyaqapheleka ukuthi lesi sidakamizwa sisebenza kakhulu ebukhoneni be-edema, ngoba siyayiqothula masinyane.
Enye inzuzo ye-mummy ukuthi ijwayela umfutho wegazi futhi yehlise ukujuluka. Umuntu uwonke uqala ukuzizwa engcono, akhathale kancane futhi akhononde kancane ngezimpawu zesifo sikashukela.
IMumiyo ilusizo ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2. Ngalo, ungakwazi ukuqeda ngokushesha amakhilogremu angeziwe, futhi uvikele futhi ukukhuluphala ngokweqile. Njengoba wazi, abantu bavame ukuthola isisindo ngokweqile ngenxa yesifo sikashukela. Kungakho kubalulekile ukuvikela le nkinga, ngoba ifaka imiphumela emibi.
Abantu bayaqonda ukuthi isifo kumele singelashwa hhayi kuphela lapho isimo sezempilo siba sibi kakhulu. Isinqumo esifanele ukuqala kwezokwelapha ngaphambi kokuvela kwezimpawu eziphazamisayo. Kungakho kunconyelwa ukuthi ucabange ngokuvimbela, okuzovikela ukonakala kwenhlala-kahle.
Kunconywa ukusebenzisa ama-18 amagremu e-mummy futhi uyiqede ngo-500 ml wamanzi ahlanzekile. Lo muthi kufanele uthathwe nezinkezo ezincane ezingama-2-3 kathathu ngosuku. Kuyalulekwa ukwenza le nqubo isigamu sehora ngaphambi kokudla. Inkambo yokwelapha icishe ibe isonto nesigamu, futhi ngemuva kwalesi sikhathi kuzodingeka ukwengeze umthamo ngenye ithisipuni futhi iphathe kakhulu. Abantu abahlushwa ukunambitheka kwe-mummy kunconywa ukuba baphuze ikhambi ngobisi noma ngamanzi amaminerali.
Ungamthatha kanjani umama
Indlela yokuthola i-mumiyo ilula impela, kepha izincomo ezithile kumele zilandelwe. Zijwayelekile kubo bonke, kepha indlela yokwamukela ingashintshwa ngokuya ngenhlala kahle yomuntu.
Ingxenye leyo kufanele ichithwe ingilazi yamanzi abilayo, kuyilapho kubalulekile ukusebenzisa amagremu amane womuthi. Isifo sikashukela sizodinga ukuthatha ikhambi kabili kungakapheli amahora angama-24. Ngesikhathi esifanayo, lokhu kufanele kwenziwe esiswini esingenalutho. Kungakho okungenani amahora amathathu kufanele adlule ngemuva kokudla ukudla.
Inkambo yokwelapha iyizinsuku eziyi-10, bese kuba nekhefu okwenziwa cishe isonto. Ngemuva kwalokho, kuvunyelwe ukuqhubeka nokwelapha. Ngokuvamile, isikhathi sokwelashwa kwesifo sikashukela nge-mummy siyinyanga, futhi ngalesi sikhathi, inhlala-kahle iba ngcono kakhulu. Kubalulekile ukuthi ungangezi umthamo uwedwa, ngoba lokhu kungaholela ekwandeni kwenhlala-kahle. Uma ulandela zonke izincomo, khona-ke impilo izothuthuka kuphela.
Izindlela zokupheka zikaMumiyo zabanesifo sikashukela
Ukwenza ngcono isimo sikashukela, kunconywa ukusebenzisa izindlela zokupheka ezahlukahlukene ngokufakwa kwe-mumiyo. Ngayinye yazo iyathandeka ngendlela yayo, futhi kunconywa ukuthi ubonane nodokotela ngaphambi kokusebenzisa ikhambi labantu.
Uma udinga ukwehlisa ushukela wegazi futhi uqede ukoma, kufanele usebenzise amagremu ama-2 we-mumiyo namanzi. Ithebhulethi ivuselelwa ku-ketshezi, ngemuva kwalokho isiphuzo kufanele siphuzwe ekuseni nangaphambi kokulala. Ngemuva kwezinsuku ezi-5, kwenziwa ikhefu, bese inkambo yokwelapha iphindwa.
Uma umuntu enesifo sikashukela sohlobo 2, leyo ndlela elandelayo izoba wusizo. Kuyadingeka ukuncibilikisa ama-4 amagremu wesidakamizwa ku-500 ml wamanzi. Udinga ukuphuza umuthi izinsuku eziyi-19, kuyilapho isipuni esisodwa 1 kufanele sisetshenziswe ngasikhathi. Ngemuva kwalokhu, udinga ukusebenzisa izinkezo ezinkulu eyodwa nohhafu zalo muthi ngezinsuku ezi-5. Kufanele uphuze umuthi njalo ngaphambi kokudla, kuyilapho isisombululo somuthi kufanele sisetshenziswe kathathu ngosuku.
Uma umuntu efuna ukuqeda ukulunywa kwesikhumba, kanye nokukhathala okwandayo, kuzodingeka ukufaka ubisi lwe-mumiyo noma ujusi omusha ku-tincture. Kuyaqapheleka ukuthi le iresiphi iyasiza ukwenza inqubo yokuvuselela emzimbeni.
Uma lesi sifo sesiqaliwe, kuzodingeka uthenge umuthi onamandla ukuze ube nenempilo. Ngokwemvelo, banemiphumela emibi eminingi ezokwenza impilo yabo ibe nzima. Ngalesi sizathu, kungcono ukusebenzisa omama ngohlobo 1 nesifo sikashukela kunokufaka impilo yakho engozini. Umuthi waziwa ngokungabi nemiphumela emibi, ngenkathi uzuzisa kakhulu umzimba.
Lapho i-mummy iphikisiwe
Uma umuntu enquma ukwelapha isifo sikashukela ngosizo lwe-mumiyo, nakanjani angalulekwa ukuba azijwayeze nale mibiko. Yize bancane, kepha ngasikhathi sinye. Uma unenye yalezi, kufanele ukhethe indlela ehlukile yokwelapha ushukela.
Ngokuzwela okwengeziwe kwento. Ngemuva kokusebenzisa i-mummy, abanye abantu bangathola imiphumela emibi ngendlela yokungasabeli kahle. Ngalesi sizathu, kunconyelwa ukuthi uqale uqinisekise ukuthi awuyiguli i-mummy.
I-Pathology yezindlala ze-adrenal. Ikakhulu kuma-pathologies ezinzima, kunconywa ukuyeka le ndlela yokwelashwa.
Isikhathi sokukhulelwa nokukhulelwa. Ngalesi sikhathi, abesifazane kufanele basebenzise kuphela izidakamizwa ezifakazelwe ezingavunyelwe kwabesifazane abakhulelwe. Ungabeki impilo yakho engozini kanye nesimo sengane engakazalwa.
Isifo sika-Addison. Yize lesi sifo se-endocrine sithathwa njengejwayelekile, kepha noma kunjalo siyenzeka. Uma ikhona, kufanelekile ukuyishiya le ndlela yokwelapha.
I-Oncological pathologies. Kulokhu, nakanjani udinga ukubonana nodokotela ngayo yonke imishanguzo yesifo sikashukela.
Iminyaka yezingane kuze kube unyaka owodwa. Izinsana akufanele zinikezwe omama.
Uma kunemiphumela emibi, iziguli zelulekwa ngokusobala ukuba zibonane nodokotela mayelana nendlela engcono kakhulu yokwelapha isifo sikashukela. Kungcono ukwenqaba i-mumiyo, ukuze ungakhubazi ukuwohloka inhlala-kahle. Uma umuntu enesiqiniseko sokuthi akanazo iziphikiso, angaqala ukwelapha isifo sikashukela ngosizo lwe-mumiyo.